जाडोमा ओठ फुट्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय – Mission
जाडोमा ओठ फुट्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस २, २०७२
जाडोमा ओठ फ्टनु वा सुख्खा हुनु सामान्य मानिन्छ । साधारणयता, यदी ओठ धेरै नै फुट्न थाल्यो भने यसले थप बिमारी बढाउन सक्ने संभावना पनि रहन्छ । तर प्राय घरेलु औषधीकै प्रयोगले ओठ फुट्ने र सुख्खा हुने समस्याबाट मुक्त पाइन्छ ।
१ झोल पर्याप्त पिउनुहोस् :
दैनिक आठदेखी १० ग्लास पानी पिउनु निकै राम्रो हुन्छ । तपाईको शरिर सुख्खा भएपछि त्यसको पहिलो असर ओठमा देखिने हो ।
२ ओठ कहिल्यै नचाट्नुहोस् :
मानिसहरु ओठ सुख्खा भएपछि त्यसलाई जिब्रोले चाट्ने गर्छन् । तर त्यस्तो गर्दा ओठ अझै फुट्छ । तत्कालका लागि यसो गर्नाले केही सहज हुनसक्छ । तर बिस्तारै तपाईको ओठमा रहेको चिल्लोपना पनि यसरी जिब्रोले चाट्दा हराउन थाल्छ र तपाईको ओठ थप सुख्खा हुन्छ । तपाईको ओठलाई छालामा रगड्नु भयो भने त्यसले उल्टै इन्फेक्सन गर्छ । बरु त्यसको सट्टा तपाई ओठमा लगाउने विभिन्न क्रिमहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
३ ओठ सफा गर्नुहोस् :
कुनै पनि क्रिम प्रयोग गर्नुअघि ओठको फुटेको भागमा डेड अवस्थामा रहेको छाला हटाउनुहोस् । यसो गर्नाले ओठको घघाउ राम्ररी देखिन्छ । तर तपाईको ओठलाई रगड्ने काम भने नगर्नुहोस् । आफैँ जान लागेको छाला छ भने मात्रै हटाउनुहोस्, जर्बजस्ती गर्दा उल्टै इन्फेक्सन हुनसक्छ । त्यसपछि क्रिम लगाएर आफ्नो ओठमा त्यसलाई बिस्तारै दल्नुहोस् । त्यस्तै तपाईले चिननी वा नूनको रसलाई पनि ओठमा दल्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा ओलिभको तेल मिसाएर दल्दा पनि राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, तपाईले मन्जनको प्रयोग गरेर पनि ओठलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यसले पनि तपाईको ओठको बिग्रिएका छालाहरु हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर साबुनको प्रयोग नगर्नुहोला किनकी साबुन वा फेसवासले तपाईको ओठलाई थप सुख्खा पार्छन् ।
४ क्रिम प्रयोग गर्नुहोस :
तपाईले ओठलाई ठीक राख्नका लागि त्यसलाई सफा गरेपछि चिपस्टिक वा अन्य क्रिम प्रयोग गर्नुहुन्छ होला । तर याद गर्नुहोस्, त्यसमा राखिएको च्याम्फोर र पेटोलियम जेली जस्ता पदार्थहरुले तत्कालका लागि ओठलाई ठीक बनाएपनि पछि फेरि सुख्खा बनाउने र त्यसैका कारण तपाईले पटक पटक त्यसको प्रयोग गरिरहनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले नरिवलको तेल, मह, बटर, आलमण्डको तेल र अन्य प्राकेृतिक चिल्लो पदार्थयुक्र क्रिम प्रयोग गर्नुहोस् । प्राकृतिक नौलीको प्रयोगले पनि तपाईको ओठ ठीक पार्नसक्छ ।
५ तेल मिसाउनुहोस :
तपाईको ओठको उपचारका लागि केही तेल तपाईको ओठमा लगाउदाँ हुन्छ । तर तपाईले तेल लगाउँदा त्यस्तो तेल स्वच्छ हुन भने जरुरी छ । जस्तै, नरिवलको तेल, आलमण्ड तेल, जोजोवा तेल, ओलिभ तेल, रोसिहिप तेल वा नौली लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
६ यदी चर्याउने छ भने त्यसलाई ठीक गर्न यसो होस् ;
यदी तपाईको ओठ चर्याएर तपाईलाई हाँस्न समेत समस्या भइरहेको छ भने त्यसका लागि तपाईले यि उपाय अपनाउनुस् ।
क) तपाईको ओठमा दैनिक रुपमा काँक्राको रस दलेर त्यस १० मिनेटसम्म राख्नुहोस् । यो निकै प्रभावकारी हुन्छ ।
ख) तपाईले थोरै मह लगाएर ओठलाई केही ठीक बनाउन सक्नुहुन्छ ।
७ केमिकल नभएको लिपिस्टीक र टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस् :
कस्मेटीक सामान जस्तै लिपिस्टिकको प्रयोगले पनि ओठ सुख्खा हुनसक्छ । त्यस्तै ओठमा लगाउने अन्य क्रिमहरुले पनि उल्टै अ‍ोठलाई सुख्खा बनाउँछन् । फ्लूराइडयुक्त मन्जनको प्रयोगले पनि ओठलाई सुख्खा बनाउँछ । त्यसैले मन्जन प्रयोग गर्दा फलूराईड फ्रि मन्जन मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् । न्यानोमा बस्नुहोस् ।
– See more at: http://www.ratopati.com/news/18616/#sthash.HzB2KtYB.dpuf
प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस २, २०७२ 2:45:34 PM |
Prevरुनुका ७ फाइदाहरु
Nextटेक्सासमा नेपालीबीच चुनावी सरगर्मी बढ्यो, सदस्यमा मेरो जित पक्का छ – सत्य थापा